Hay’adaha u xilsaaran dib u-eegista dastuurka oo warsaxaafadeed soo saaray. | Somali National Television - sntv.so
Home SHURUUCDA DALKA Hay’adaha u xilsaaran dib u-eegista dastuurka oo warsaxaafadeed soo saaray.
Hay’adaha u xilsaaran dib u-eegista dastuurka oo warsaxaafadeed soo saaray.
Shirkaan oo u dhexeeyey hey’adaha u xilsaaran dib u eegista Dastuurka kmg ah ee Soomaaliya, sida guddiga madax bannaan ee dib u eegista Dastuurka Guddiga la socodka iyo Hirgelinta Dastuurka ee Barlamaanka labadiisa Aqal iyo wasaaradda Arrimaha Dastuurka, waxaa lagu falanqeeyey qorsheyaashii la dajiyey ee loogu talogalay in la fuliyo sannadkaan 2019-ka.
Previous articleTaliyaha Booliska oo qalab ciidanka kala wareegay safiirka Masar ee Soomaaliya.
Next articleCiidanka xoogga dalka oo ku dhawaad 20 argagixiso ku dilay howlgallo laga sameeyay Hiiraan iyo jubbada dhexe.